Jimmie Åkesson oo siyaasada ka fariistay | Somaliska
Gudoomiyaha xisbiga cunsuriga ah ee Sverigedemokraterna (SD) Jimmie Åkesson ayaa u muuqda mid xamili waayay culeyska siyaasada isagoo shalay ku dhawaaqay in uu isku qoray xanuun ka dib markii uu dareemay culeys maskada ah. Åkesson ayaa siyaasada ka maqnaan doona muddo aan la cayimin.
Åkesson ayaa warqad uu ku qoray boggiisa Facebook uga hadlay sababta uu uga fariistay siyaasada, isagoo sheegay in shaqada badan iyo cadaadiska siyaasadeed ee lagu haayo ay keentay in uu dareemo xanuun. Waxa uu sheegay in uusan awoodin in uu shaqadiisa si caadi ah u wato sidaas darteed uu go’aansaday in uu si guud uga fariisto siyaasada isla markaana waqtigiisa la qaato reerkiisa iyo caruurtiisa. Åkesson ayaa ka cabtay cadaadiska siyaasadeed iyo naceybka ay ku hayaan dadka ka soo horjeeda.
Hogaanka xisbiga SD ayaa waxaa la wareegaya inta Åkesson uu maqanyahay ninka lagu magacaabo Mattias Karlsson oo hada hogaanka u haya xubnaha baarlamaanka ee xisbiga SD.
Åkesson ayaa horumar weyn gaarsiiyay xisbiga cunsuriyiinta ee SD, isagoo ka dhigay xisbiga sadexaad ee ugu weyn Sweden. Waxa uu sidoo kale la kulmay cadaadis iyo olole balaaran oo looga soo horjeedo siyaasadiisa, xisbiyada kale ee Sweden ayaa siyaasad ahaan go’doomiyay SD, iyagoo u diiday in uu wax saamayn ah ku yeesho siyaasada wadanka.
Booliska Stockholm oo joojiyay ugaarsiga soo galootiga
Balaa ka raacday, ileyn sidaas buuba u adkeysin yar yahay ee nimanku waa naf. Halkan jinsi naceyb ah ah oo ay awood ku yeesheen Sweden waaba naf la caari. Wax kasta oo aan maslaxo ku socon waa iska baa,baan ugu danbeynta
Alla ma cugdadi buu xanuun la garan wayay ka qaday jiin ku gal